कम्पनी विश्लेषण, सोमवार, २२ वैशाख २०७१ | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण, सोमवार, २२ वैशाख २०७१
on: २२ बैशाख २०७१, सोमबार ००:०० लगानी
कम्पनी विश्लेषण, सोमवार, २२ वैशाख २०७१
फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्क
सञ्चालन मिति : २०६६ पुस २४
पछिल्लो कारोबार मूल्य : ७००
५२ हप्ताको उच्च मूल्य : ७०३
५२ हप्ताको न्यून मूल्य : १४४
१८० दिनको औसत मूल्य : ४६३.३४
अध्यक्ष : सुरेन्द्रराज रेग्मी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : नुमनाथ पौडेल
गत चैत अन्तिम साताबाट फष्र्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयरमूल्य लगातार ओरालो लागेको यसको मैनबत्ती रेखाचित्रले देखाएको छ । आरएसआई परिसूचकले सङ्केत गरेअनुसार यस बैङ्कको शेयर ओभरबट क्षेत्रमा पुगेकाले स्वाभाविक रूपमा करेक्शन भएको प्राविधिक विश्लेषणले देखाएको छ । पछिल्लो अवधिमा यस बैङ्कको शेयरमूल्यमा बढी नै उतारचढाव भएको स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनले सङ्केत गरेको छ । त्यसैले, यस बैङ्कको शेयरमा लगानी गर्दा नाफा बमाउने अवसर तथा जोखीम दुवै बढी रहेको देखिन्छ । तर, कम्पनीको हालै प्रकाशित तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले यसका आधारभूत परिसूचकहरूमा उत्साहजनक सुधार भएको देखाएको छ । त्यसैले, यस कम्पनीको शेयरमा प्राविधिक तथा आधारभूत दुवै पक्षको गहन अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नु उचित हुन्छ ।
-फष्र्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयरमूल्यको मैनबत्ती चित्रले शेयरमूल्य क्रमिक रूपमा घटेको देखाएको छ । यद्यपि रेखाचित्रको अन्तिममा मुडुलो मैनबत्तीको आकृतिले शेयरमूल्य घट्ने क्रम रोकिएको सङ्केत गरेको छ । त्यस रेखाचित्रअनुसार यस बैङ्कको शेयरमा लगानी गर्नु आगामी दिनका लागि लाभदायक नै हुने सम्भावना छ ।
-त्यसैगरी बैङ्कको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) अहिले ६५ स्केलमा छ । यसले शेयर यतिबेला न्यूट्रल जोनमा रहेको देखाउँछ । रेखाचित्रअनुसार बजारमा यस बैङ्कको शेयरको माग तथा आपूर्तिको अवस्था बराबरीमा रहेको भान हुन्छ । साथै, ओभरबट क्षेत्रमा जानका लागि पनि शेयरमूल्य अझै बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा लगानी गर्नु सुरक्षित हुने देखिन्छ ।
-बैङ्कको शेयरमूल्यको स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन रेखाचित्रले शेयरमा स्वाभाविक उतारचढाव भएको देखाउँछ । यसले शेयरमा जोखीम कम भएको बुझिन्छ । जोखीम कम भएकै कारण नाफा पनि कम हुने देखिन्छ । त्यसैले जोखीम बहन गर्न नचाहने तथा दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले यसमा लगानी गर्नु उचित हुनेछ ।
-गतवर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैङ्कको खुद नाफा ८२ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेर रू. १ करोड ९५ लाख पुगेको छ । यो चुक्ता पूँजीको १९ दशमलव ६० प्रतिशत हो ।
-समीक्षा अवधिमा बैङ्कको दीर्घकालीन लगानी शतप्रतिशतले बढे पनि आकार भने निकै सानो छ । त्यस्तै अल्पकालीन लगानी ७३ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब ५ करोड पुगेको छ ।
-बैङ्कको ब्याज आम्दानी ३५ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेर रू. ६ करोड ३९ लाख पुगेको छ । त्यस्तै ब्याज खर्च भने २३ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेर रू. ३ करोड १६ लाख पुगेको छ । खर्चभन्दा आम्दानीको बृद्धि अनुपात उच्च भएकाले खुद ब्याज आम्दानी ४९ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेर रू. ३ करोड २३ लाख पुगेको छ ।
-गतवर्षको तुलनामा बैङ्कको खुद सञ्चालन आम्दानी ४५ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेर रू. ३ करोड ८५ लाख पुगेको छ । फलस्वरूप सञ्चालन मुनाफा ५३ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेर रू. २ करोड ५४ लाख पुगेको छ ।
-सो अवधिमा बैङ्कको पूँजीकोष ४ दशमलव ११ प्रतिशतले घटेर जोखीम भारित सम्पत्तिको १३ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी निष्क्रिय कर्जा शून्य भएकाले सम्भावित जोखीम व्यवस्थापनको रकम पनि शून्य छ ।
-गतवर्षको तुलनामा बैङ्कको जगेडा कोष ६५ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, बैङ्कको अपरेशन मार्जिन तथा प्रोफिट मार्जिनमा पनि सामान्य सुधार देखिएको छ ।